IYunivesithi ngokwahluka »Hodges University
IYunivesithi yaseHodges ikhokelela kwiNdlela eyahlukileyo kwiMfundo ePhakamileyo
Ukwahluka yindlela yokuphila eHodges, apho ifilosofi yeyantlukwano yomelele. Iyunivesithi iyomelezwa kwaye ixhotyiswe ngabahlali bethu abahlukeneyo, abanamasiko ahlukeneyo abafundi, ubuhlakani, kunye nabasebenzi abazisa ubuninzi bamazwi kunye neembono kwiinzame zethu ekwabelwana ngazo. Siyakuhlonipha kwaye sikuxabisile ukubaluleka kwabantu abavela kuzo zonke izizwe, imvelaphi yobuhlanga, ubudala, isini, iinkolo, ukuthanda ezesondo, ukukhubazeka, imeko yezoqoqosho okanye amagqala, kunye nezinye iimbono ezahlukeneyo kunye nokwahluka kwabantu, kwaye siyakuxabisa ukwahluka kweengcinga. Sizimisele kunyamezelwano, uvakalelo, ukuqonda, kunye nokuhloniphana kuyo yonke indawo kuluntu lwethu, kwaye siyangqina isithembiso sethu sokubonelela ngendawo yokwamkela omnye nomnye.
IYunivesithi yaseHodges ibizwa ngokuba yiNkokeli yoLwahlulo kunye nokuBandakanywa liZiko lokuQinisekiswa kweZiko.
# 3 Iikhampasi zeKholeji ezikhuselekileyo eFlorida
Ebizwa kwiiKholeji zeeNiche ezahlukeneyo eFlorida
Jonga iiNkqubo zethu
Kutheni le nto iyantlukwano ibalulekile eKholejini?
Ngamnye wethu uza kwikholeji okanye eyunivesithi azikhethele yona kunye namava ethu abumba indlela esilibona ngayo ilizwe. Njengoko siqala ukudibana nabantu abatsha phakathi kwabafundi esikunye nabo kwaye sithatha izifundo kunye nabo, siqala ukubona ukuba amava ethu yile nto nje-ngamava ethu.
Ngeengqondo ezivulekileyo, sifunda ukuba amava abanye azisa njani iimbono ezintsha kumbono wethu nakwindlela esilibona ngayo ilizwe. Ukuvula iingqondo zethu ukuze siqonde ukubandakanywa, ubuhlanga, ubuhlanga kunye neyantlukwano ngokwesini, inqanaba lobugqala, iyantlukwano kwinkolo, ubudala, kunye nenqanaba lezoqoqosho kusenza abantu abajikeleze ngakumbi. Njengoko uphuma uye kubasebenzi ngale ndlela intsha, uya kuphucula ukhuphiswano lwezoqoqosho lwaseMelika.
IYunivesithi yaseHodges ijolise ekwakheni iibhlorho kuluntu olukhulu kunye nokusebenza namaqela ukuzisa ukugxila okubanzi kunye nokuqaqanjiswa ngakumbi kumava okwahluka kunye nokubandakanywa kokugqwesa ngokuzibandakanya koluntu. Ukuthetha ngoku kugxila, iHodges ibonelela ngekhalenda yemisebenzi eyahlukileyo yabafundi beekholeji kunye namalungu oluntu ngokufanayo. Zama ukufikelela ekuqondeni ukuba yintoni eyenza sahluke kwaye sahluke, jonga iinkcubeko ezininzi ezisebenzayo, kwaye uya kukhula ube ngumntu owamkela ngokuphandle umahluko wabanye. Le mbono intsha iya kukuvumela ukomeleza ukuqonda kwakho kwabanye emsebenzini.
Izamkele njani iiHodges U Ukwahluka?
IHodges U yamkela iyantlukwano ngeendlela ezininzi.
Njani? Ngokusombulula imiceli mngeni eza nokutshintsha kwamanani abantu, iimbono ezahlukeneyo, kunye nokulingana emsebenzini. IiHodges zijongana nale mingeni ngokugxila kubandakanywa, ubuchule benkcubeko kunye nokulingana. Ngale ndlela, iYunivesithi isebenza ukwenza inkcubeko etyebileyo kunye netyebileyo ngomzimba wabafundi abohlukeneyo. Oku kwahluka kunceda abafundi bazive bexhotyisiwe kwaye kunokuzizisela ngokwabo ukuba bafunde kwaye bakhule.
Kutheni Ufanele Ukwamkela Ukwahluka?
Ukuba ucwangcisa ukusebenza kwindima yokongamela, okanye kwiqela, kubalulekile ukuba wamkele imeko yokwahluka kwimpumelelo yakho. UHodges ufundile ukuba iisuphavayiza zanamhlanje kufuneka zibe nezakhono zenkcubeko kunye nezentlalo, kwaye ezi zakhono zikwavumela ukuba ube lilungu elivelisayo leqela. Uya kucelwa ukuba ube noxanduva lokuvelisa kakhulu kunye nokubandakanywa kwabo bonke uninzi lweendawo zomsebenzi.
Esi sidingo sokuba ubenakho ukusebenza kumaqela eenkcubeko kunye nawokuvelisa amandla aqhubayo kukuzinikela kukaHodges ekudaleni imeko eyahlukileyo. Yonke into esiyenzayo ijolise ekudaleni imeko-bume yokuba abafundi bethu baphumelele, kwaye ukhetho lwethu lokubonelela ngemozulu eyahlukileyo yokufunda bubungqina bokuzinikela kwethu kwindlela yakho yempumelelo.
Uluntu lwaseYunivesithi yaseHodges
Izibalo zeHodges ezahlukeneyo
IYunivesithi yaseHodges yamkela abafundi abaphuma kuzo zonke iintlanga, imvelaphi yobuhlanga, ubudala, isini, iinkolo, indlela yokuziphatha ngokwesondo, ukukhubazeka, imeko yezoqoqosho okanye igqala lomkhosi, kunye nezinye iimbono ezahlukeneyo kunye nolwahluko. Sikhuthaza umfundi ngamnye ukuba athethe kwaye afundise abanye ngamava abo ahlukeneyo ukudala imeko yokufunda yolwazi olwandisiweyo kubo bonke.
Sizimisele ukudala ikhampasi eyahlukeneyo yabo bonke abafundi ukuze bafumane impumelelo. Apha ngezantsi kukho izibalo zeYunivesithi yaseHodges.
Ubhaliso lobuhlanga kunye nobuhlanga
WaseMelika waseMelika: 12%
Mhlophe, engengawo amaSpanishi: 38%
Enye, ixutywe, okanye ayaziwa: 6%
Abafundi abambalwa abancinci kunye nenqanaba lokwahlukahlukana ngokobuhlanga kwiYunivesithi yaseHodges ngama-62%. Lo mahluko usenza sibe yenye yezona ntlangano zemfundo ephezulu eFlorida. Sikwabizwa njengeziko eliphambili lokuSebenza ngeSpanishi. Ukuba yeyona yunivesithi yahlukahlukene eFlorida ngumceli mngeni esiwamkelayo, kuba ekufuneni ukubonelela abafundi ngemfundo eyahlukeneyo-sifuna ukudala ilizwe elingcono kuthi sonke.
Nxibelelana noHodges U malunga neyantlukwano
Siyayamkela imibuzo yakho malunga neyantlukwano nokubandakanywa kokubini kwikhampasi nakuluntu. Nceda unxibelelane nathi apha:
IOfisi yokwahluka, ukubandakanywa kunye nokuthotyelwa kwenkcubeko
4501 IColonial Boulevard, iSakhiwo H
IFort Myers, FL 33966